Faa'iidooyinka Qorshaha Medicare - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Faa'iidooyinka Qorshaha Medicare
Faa'iidooyinka Qorshaha Medicare
Qorshayaal dhameystiran iyo faa iidooyin weyn xubnaha.
Wax ka baro faa'iidooyinka qorshahayaga:
Cuntada Dheecaan Dheeraad ah
Faahfaahinta faa'iidadu waxay ku kala duwanaan kartaa qorshe ahaan. Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan caymiskaaga, fadlan eeg Caddaynta Daboolista qorshahaaga (EOC) ama naga soo wac 1-800-942-0247.
Waxaa laga yaabaa in baahiyahaaga caafimaad is beddelaan. Haddii aad u baahan tahay caymis ka badan ama ka duwan waxa qorshahaagu hadda bixiyo, waxaan ka wada hadli karnaa xulashooyinkaaga waxaanan kaa caawin karnaa inaad samayso isbeddel kasta oo loo baahdo. Sannad kasta, waxaad haysataa ikhtiyaarka ah inaad ku darto ama ka saarto caymiska iyada oo aan lahayn xannibaadyo, inta lagu jiro Xilliga Diiwaangelinta Sannadlaha ah (AEP).